Inona avy ireo vokatry ny clarithromycin 500 mg? - BALLYA
BALLYA BLOG - Andininy Sakafo ara-tsakafo rojo famatsiana ambony sy ambany
Antigén sy Antibodies
Fitantanana ny toeram-pambolena
Vokatra vita amin'ny ronono
Fanadihadiana & fanandramana
Serivisy sakafo sy fivarotana antsinjarany
Inona avy ireo vokatry ny clarithromycin 500 mg?
Posted on Janoary 12, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona no atao hoe clarithromycin?
Vokatry ny fanafody
Vokatry ny Clarithromycin
Fanampiana mila fifantohana
Clarithromycin dia avy amin'ny erythromycine. Vita soa aman-tsara novolavolan'ny Taisho Corporation any Japon tamin'ny fiandohan'ny taona 1990 ary nosoratana tamin'ny anarana hoe Clarith. Taorian'izany dia nafindran'ny Taisho voalohany tany Abbott any Etazonia ny famokarany. Voatanisa tany Irlandy sy Italia izany tamin'ny 1990. Tamin'ny Oktobra 1991, nankatoavin'ny FDA ho fanafody vaovao ho an'ny sokajy IB. Ny marika dia Biaxine. Tamin'ny taona 1993 dia voatanisa ao Hong Kong, Sina izy toy ny Klacid.
Ny marika any Eropa sy Azia dia Klaxian. Voatanisa ao amin'ny firenena maro izy, ary nitombo tsy an-kijanona ny anjaran'ny tsena, ary nitana andraikitra lehibe tamin'ny fampiharana ara-pahasalamana. Clarithromycin manana ny mampiavaka ny fahombiazana avo lenta, mora entina amin'ny alàlan'ny fitantanana am-bava, ary ny fitoniana asidra tsara. Ny zava-mahadomelina dia manana hetsika matanjaka amin'ny bakteria miabo tsara, miorina amin'ny anzima, ary mifantoka be amin'ny serum sy ny havokavoka. Voaporofo ara-pitsaboana fa ny hetsika in vivo dia 6-10 heny noho ny erythromycine ary 14-35 heny noho ny an'ny josamycin.
Izy io dia miavaka amin'ny fanatsarana bioavailability, fizarana tsara amin'ny sela sy sela, antsasaky ny halavana ary ny tahan'ny fiatraikany ratsy dia 3% fotsiny. Izy io dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny taovam-pisefoana ambony sy ambany ary ny aretin-koditra sy ny hoditra malemy. Nanjary solon'ny erythromycin an'ny macrolide antibiotika. Ho fanampin'izany, ny US FDA dia nanaiky ny fitambaran'ny clarithromycin sy losec ho drafitra fitsaboana ny fery amin'ny gastric sy duodenal vokatry ny Helicobacter pylori; ity fanafody ity ihany koa no safidy voalohany amin'ny fitsaboana aretina amin'ny mararin'ny SIDA.
2. Vokatry ny fanafody
Clarithromycin dia antibiotika macrolide ring 14-membered. Ny fiparitahan'ny bakteria dia mitovy amin'ny an'ny erythromycine sy ny roxithromycin, fa ny fiatraikan'ny bakteria amin'ny bakteria Gram-positive toa ny Streptococcus, ny pneumococcus, ary ny staphylococcus dia somary tsara kokoa, ary misy fiatraikany ihany koa amin'ny fihenan'ny fanoherana erythromycine.
Clarithromycin sy ny metabolites ao amin'ny vatana dia nanatsara ny fiantraikan'ny bakteria amin'ny bacilli gripa. Clarithromycin koa dia misy fiatraikany amin'ny Neisseria gonorrhoeae, Listeria, Campylobacter jejuni, ary misy fiatraikany matanjaka kokoa amin'ny Legionella pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, sns noho ny erythromycin.
Ho fanampin'izany, manana hetsika sasany manohitra ny Treponema pallidum, Mycobacterium avium ary Toxoplasma murine, ary ny ankamaroan'izy ireo dia tsara kokoa noho ny karazana hafa. Ho fanampin'ny fananana vokatra mahery amin'ny bakteria amin'ny cocci anaerobic, ny fiatraikany amin'ny Bacteroides fragilis dia tsara kokoa noho ny an'ny erythromycine. Ny vokatry ny Clarithromycin amin'ny Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Influenza bacillus ary antibiotika hafa dia matanjaka kokoa noho ny erythromycin.
Ity zava-mahadomelina ity dia antibiotika macrolide, ary ny mekanisma dia ny manakana ny tsy fitovizan'ny proteinina amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fifandraisan'ny vondrona 50S an'ny nukleoprotein hamokatra vokarin'ny bakteria. Ity zava-mahadomelina ity dia misy fiatraikany amin'ny bakteria Gram-positive toy ny Staphylococcus aureus, Streptococcus, pneumococcus, sns. , Peptostreptococcus, ary Propionibacterium acnes.
Ho fanampin'izany, izy io koa dia misy vokany manakana ny mycoplasma. Ny mampiavaka an'io fanafody io dia ny fiasan'ny bakteria ao aminy dia mitovy amin'ny erythromycine in vitro, fa ny asany miady amin'ny bakteria sasany toy ny Staphylococcus aureus, Streptococcus, Haemophilus influenzae sns dia mahery noho ny erythromycin. Misy ny fanoherana ny erythromycin.
Satria ny spectrum anti-bakteria an'ny clarithromycin dia mitovy amin'ny an'ny erythromycin, dia azo ampiasaina amin'ny fomba hafa izy roa. Saingy tsy mitovy amin'ny erythromycin, ny clarithromycin dia misy fiatraikany mahery vaika kokoa amin'ny Streptococcus, Legionella, ary Chlamydia trachomatis noho ny erythromycin, indrindra ny Helicobacter pylori, izay ampiasaina tsotra izao hanafoanana azy. Clarithromycin dia hafa ihany koa amin'ny erythromycin. Azo alaina am-bava mivantana izany. Rehefa avy naka azy io dia afaka mahatratra dimam-polo eo ny bioavailability tanteraka. Aorian'ny fakana azy dia hafa ihany koa ny fifantohan'ny taova tsirairay. Amin'ny ankapobeny, ny fifantohana ao am-bato dia ambony noho ny fifangaroan'ny ra.
Amin'ny ankapobeny, ny klithromycine dia afaka mitsabo sy manamaivana ireo aretina mikraoba amin'ny sofina, orona, tenda, lalan-pisefoana ambany, hoditra ary tavy malemilemy. Ohatra, raha misy haino aman-jery otitis maranitra, na urethritis, sns, dia azo ampiasaina io fanafody io.
Ampiasaina indrindra amin'ny lalan-drivotra ambony sy ambany ateraky ny bakteria mora tohina, anisan'izany ny tonsillitis, pharyngitis, sinusitis, bronchitis, pnemonia, sns. azo ampitahaina amin'ny hafa macrolides. Clarithromycin dia azo ampiasaina ihany koa amin'ny aretin'ny lalan-drà genitourinary vokatry ny Chlamydia trachomatis na Ureaplasma urealyticum, ary ny aretin'ny mycobacterial atypical amin'ny mararin'ny SIDA.
Ny karazana bakteria dia mitovy amin'ny erythromycine. Izy io dia miorina amin'ny asidra gastric ary misy fiantraikany mahery vaika amin'ny bakteria Gram-positive. Izy io dia misy hetsika fanoherana ny bakteria manohitra bakteria Gram-ratsy, Streptococcus, Mycoplasma ary Chlamydia. Izy io dia mandaitra amin'ny Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae ary Mycoplasma pneumoniae. Amin'ny lafiny klinika, dia ampiasaina indrindra amin'ny bronchitis, pnemonia, pharyngitis, tonsillitis, mycoplasma pnemonia, otrikaretina hoditra sy sela malemy, otitis media, periodontitis, kohaka kohaka, tazo mena.
Clarithromycin dia reagent biokimika, izay mitana andraikitra amin'ny fisorohana ny fandotoana mikraoba sy ny fitiliana amin'ny kolontsain'ny sela. Ankoatr'izay, clarithromycin dia antibiotika macrolide ring 14-membered amin'ny fanafody. Ny fihanaky ny bakteria dia mitovy amin'ny an'ny erythromycine ary roxithromycin, fa ny vokatry ny bakteria amin'ny bakteria Gram-positive toy ny Streptococcus, pneumococcus, ary staphylococcus dia somary tsara kokoa, ary misy fiatraikany ihany koa amin'ny fihenan'ny fanoherana ny erythromycine Antibacterial activite.
Clarithromycin sy ny metabolites ao amin'ny vatana dia nanatsara ny fiantraikan'ny bakteria amin'ny bacilli gripa. Clarithromycin koa dia misy fiatraikany amin'ny Neisseria gonorrhoeae, Listeria, Campylobacter jejuni, ary Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, sns.
3. Doka Clarithromycin
Ny olon-dehibe dia mandray 250 mg isaky ny 12h, ary ny fatra ho an'ireo marary mafy dia azo ampitomboina 500 mg isaky ny 12h; ny fizotran'ny fitsaboana dia miankina amin'ny ambaratongan'ny aretina, matetika 7 ka hatramin'ny 14 andro. Raha latsaky ny 0.501ml / 1.73 metatra toradroa ny tahan'ny fahazoana kôlininina, dia antsasaky ny fatra.
Dosis ho an'ny ankizy: 7.5 mg / kg isan'andro, in-2 isan'andro, ny fatra avo indrindra dia tsy mihoatra ny 500 mg isan'andro. Tranga maivana: 250 mg isaky ny avy, 500 mg isaky ny tranga matotra, indray mandeha isaky ny 12 ora, ary ny fitsaboana dia 7-14 andro. Ankizy mihoatra ny 12 taona no isaina ho olon-dehibe. Tsy tokony hampiasa an'io fanafody io ny ankizy latsaky ny 12 taona.
1. Fihetseham-po diso
Afa-tsy ny fanafoanana ny fivontosana, ny clarithromycin koa dia misy fiatraikany ratsy manokana. Ny mahazatra dia ny fivalanana, ny fisaleboleboana, ny fiovana amin'ny tsiro, ny tsy fihinanan-kanina, ny fanaintainan'ny kibo, sns. Ireo fepetra ankapobeny dia somary malefaka ihany; leukopenia, phosphatase alkaline avo, ary bilirubin avo dia mahazatra mandritra ny fanafody; indraindray dia azo jerena enteritis pseudomembranous sy Pancreatitis; amin'ny tranga sasany, ny clarithromycin dia mety hiteraka arrhythmia ventricular sy elanelam-potoana QT lava koa.
Ny zava-mahadomelina macrolide dia misy fiatraikany ratsy lehibe toy ny fanitarana elanelam-potoana QT, fibrillation ventricular, ary torsade de pointes ventricular tachycardia. Misy ihany koa ny tatitra momba ny fitomboan'ny isan'ny maty amin'ny mararin'ny aretim-po taorian'ny nandraisany ny klithromycine tamin'ny fampiharana klinika.
Ny fiatraikany matetika amin'ny klithromromine am-bava dia ny tsy fahazoana aina amin'ny gastrointestinal, aretin'andoha ary ny fiovana amin'ny tsiro. Toy ny zava-mahadomelina macrolide hafa, ny clarithromycin koa dia voalaza fa miteraka fiasan'ny aty tsy ara-dalàna. Ity tsy fanarahan-dalàna ity dia mety ho matotra, ary vitsy dia vitsy ny tatitra momba ny fahafatesana noho ny tsy fahombiazan'ny aty.
Ny fampifangaroana ny blockithithithithy sy ny calcium calcium blockers dia mety miteraka ratra voa, ary ny fifandraisan'ny zava-mahadomelina eo anelanelan'ny clarithromycin sy nifedipine no tena antony mahatonga ny tsy fahombiazan'ny voa. Na dia maro aza ny fanadihadiana nanaporofo an'ity fanehoan-kevitra ratsy ity, dia matetika no ambanin-javatra ny fifandraisan'ny clarithromycin sy ny fantson'ny kalsioma.
Ho an'ny zava-mahadomelina sulfonylurea, ny fiatraikany matetika indrindra dia ny hypoglycemia. Ireo marary antitra dia mora voan'ny hypoglycemia. Clarithromycin dia mpanakana ny anzima zava-mahadomelina aty CYP3A4, izay afaka mampitombo ny fatran'ny glipizide amin'ny alàlan'ny fanakanana ny metabolisma glipizide ary hanatsara ny fihenan'ny siramamy ao aminy. Ny fitambaran'ireo fanafody roa ireo dia mety hiteraka hypoglycemia mahery.
Ny fampiasan'ny klaritromisinina sy statin miaraka izay tsy asan'ny CYP3A4 (rosuvastatin, pravastatin, fluvastatin) amin'ireo zokiolona dia ahiana hiditra hopitaly ihany koa noho ny ratra voa, hyperkalemia na mety maty rehetra.
Clarithromycin dia afaka manadio ny flora tsinay afaka mampihetsika digoxine, amin 'izany dia miteraka fivezivezena hépatika digoxine tsinay, izay afaka mampitombo ny fiakaran'ny ra ny digoxin ary miteraka fihetsika misy poizina.
Ireo olona tsy mahazaka macrolides, vehivavy bevohoka, vehivavy mampinono, olona marary mafy amin'ny aty sy ny voa, arrhythmia, bradycardia, elanelam-potoana QT maharitra, aretim-po tsy ampy vy, tsy fahatomombanan'ny fo ary ny aretin-drano sy ny herinaratra dia tokony hampiasa azy io am-pitandremana. Ny vokatra dia metabolisma indrindra ary esorina ao amin'ny atiny, noho izany ireo marary tsy ampy amin'ny aty, tsy fahampian'ny voa, ary ireo be antitra mihoatra ny 65 taona dia mila mijery manokana ireo fihetsika ratsy rehefa mampiasa fanafody.
Ny fihenan'ny gastrointestinal sy ny soritr'aretin'ny rafitra dia mety vokatry ny fihoaram-pefy, ary azo omena lavage gastric sy fitsaboana manohana. Na ny hemodialysis na ny dialy peritoneal dia tsy afaka manaisotra ny vokatra, ka tokony hatao haingana araka izay tratra ny lavage gastric, ary tokony homena fitsaboana mifanaraka amin'izany. Voarara ho an'ny vehivavy bevohoka (ny fifantohan'ny Clarithromycin amin'ny embryon biby dia 2-17 heny noho ny serum olombelona). Ny vehivavy mampinono dia tokony hampiasa azy io am-pitandremana (tokony haato ny fampinonoana).
3. Fanampiana mila fifantohana
Ampiasao am-pitandremana amin'ireo marary manana fahasimban'ny aty na simbaina mafy ny renal.
Ho an'ny fihenan'ny renal mahery vaika (latsaky ny 30ml / min ny tahan'ny fahazoan-dàlana kreatinina dia ilaina ny fanitsiana fatra. Ny fatra mahazatra dia 0.25g indray mandeha, indray mandeha isan'andro; ho an'ireo marary voan'ny aretina mafy, ny fatra voalohany dia 0.5g, ary avy eo 0.25g indray mandeha, indroa isan'andro.
Misy ny allergy cross sy ny fanoherana zava-mahadomelina eo anelanelan'ny Clarithromycin sy erythromycin ary ireo fanafody macrolide hafa.
Toy ny antibiotika hafa, dia misy areti-mifindra vokatry ny holatra na bakteria tsy mahazaka zava-mahadomelina. Amin'izao fotoana izao dia mila mijanona tsy mampiasa Clarithromycin ianao ary mandray fitsaboana sahaza.
Clarithromycin dia azo alaina am-bava amin'ny vavony foana, na alaina amin'ny sakafo na ronono. Ny fihinanana azy amin'ny sakafo dia tsy hisy fiatraikany amin'ny fifohana azy.
Ny ra na ny dialy peritoneal dia tsy afaka mampihena ny fifantohan'ny ra amin'ity vokatra ity.
Clarithromycin amin'ny biby laboratoara dia poizina amin'ny embryon sy foetus. Clarithromycin dia fanafody kilasy C ampiasaina mandritra ny fitondrana vohoka. Clarithromycin sy ny metabolites dia afaka miditra amin'ny rononon-dreny. Ny vehivavy bevohoka sy ny vehivavy mampinono dia tokony handanja tanteraka ny lafy tsara sy lafy alohan'ny hanapahana hevitra raha hampiasa azy io. Raha misy tokoa ny famantarana ny vehivavy mitaiza, dia tokony haato ny fampinonoana rehefa mampihatra an'io vokatra io.
Aza apetraka amin'ny zaza tratran'ilay fanafody.
Ny fonosana zava-mahadomelina maloto dia tsy tokony hatsipy kisendrasendra.
Clarithromycin dia derivative an'ny erythromycine. Izy io dia mandaitra be, mora entina am-bava ary manana fitoniana asidra tsara. Amin'ny ankapobeny, ny clarithromycin dia afaka manolo ny erythromycine amin'ny ankapobeny. Saingy ny dokotera dia mbola mila mitandrina ny fatra sy ny fitambaran'ny clarithromycin, satria raha tsy mety ny fampiasana azy dia hametraka ny marary amin'ny loza izany.
BALLYA manome a clarithromycin-dipsticks fitsapana haingana hilaza aminao raha misy clarithromycin residues amin'ny vokatra anaty rano nohaninao.
pipette fitaovana fanamboarana orinasa
Ahoana no hanombohana ny fanamboarana kitapo fanandramana Covid 19?
Azonao atao ve ny mampiasa terramycin amin'ny olombelona?
Ny fampiasana tetracycline ho an'ny trondro
Inona no ampiasaina amin'ny menaka tetracycline?
Ahoana no mahatonga ny nify tetracycline?
Inona no atao hoe tetracycline?
Inona avy ireo voka-dratsin'ny doxycycline mahazatra?
Inona no ampiasaina amin'ny fitsaboana aureomisinina?
Ny ceftiofur dia cephalosporin?
Inona avy ireo taranaka cephalosporins samihafa?
Inona no ampiasaina amin'ny fitsaboana an'i Cefdinir?
Antibiotika mahery vaika ny cephalexin?
Inona no ampiasaina amin'ny antibiotika cephalosporins?
Inona no ilana ny penicillin V?
Inona no atao hoe penicillin g?
Inona avy ireo voka-dratsin'ny piperacillin?
Inona avy ireo vokatry ny nafcillin?
Karazan-bakteria inona no vonoin'ny ampicillin?
Inona no maha samy hafa ny amoxicillin sy ny penicillin?
Inona no azon'ny Amoxicilina atao aminao?
Ahoana no hizahana toetra an'i Covid 19 any an-trano?
Inona avy ireo ohatra amin'ny antibiotika beta lactam?
Inona no ilana asidra klavulanika?
Fitsapana ny rora an'ny antigen SARS-CoV-2
Inona no ilaina amin'ny menaka manitra chloramphenicol?
Ny sofina chloramphenicol dia milatsaka tsara amin'ny aretin-tsofina?
Ny methyl-sulfonyl analog an'ny chloramphenicol: Thiamphenicol
Inona no ilana florfenicol?
Inona no atao hoe lincomycine?
Inona avy ireo voka-dratsin'ny clindamicina?
Antibiotika mahery vaika ny vancomycin?
Inona no atao hoe polypeptide?
Karazana antibiotika inona ny polymyxin B?
Antibiotic-Tilmicosin amin'ny biby
Azo antoka amin'ny alika ve ny tylosin?
Ny spiramycine ve dia macrolide?
Inona no ilana menaka manitra erythromycin ophthalmic?
Fampidirana fohy an'i Erythrocin
Inona ny antibiotika macrolides?
Miasa ve azithromycin ho an'ny Uti?
Inona no tokony ho fatra azithromycin?
Inona no ampiasaina amin'ny fitsaboana ny histinomycine?
Inona no ilàna ny neomycin?
Inona no ampiasaina amin'ny fitsaboana ny gentamicin?
Ampiasaina inona ny sulfatine gentamicin?
Inona no ilana ny streptomycin?
Marika desiccant 20 malaza indrindra ao Shina
Fangatahana hafanana 10 ambany be ambany indrindra any Shina
SAFETY SAKAFOFitsapana MYCOTOXINFitsapana PESTICIDETEST HONEYFitsapana ny rononoFitsapana EGGMPITONDRA LIQUID
Namboarina tamim-pireharehana BALLYA
LinkedIn Facebook Pinterest YouTube RSS amin'ny twitter Instagram Facebook-banga rss-banga linkin-blank Pinterest YouTube amin'ny twitter Instagram